More than three months have passed since China Telecom announced the prequalification of outdoor optical cable procurement projects in 2020. Although we are still doubting whether centralized procurement will proceed as usual, China Telecom announced that the centralized procurement project had w...ဆက်ဖတ်ရန် »
C114 News, October 27 (Shuiyi) On October 26-28, 2020, the World Fiber Optic Cable Conference held an online conference, which is the world’s top event in the fiber optic cable industry, gathering more than 100 telecom network executives, fiber optic cables Manufacturers’ representati...ဆက်ဖတ်ရန် »
Optical fiber jumpers are often used in life, so what is his production process? Optical fiber patch cord production process Baidu 1. Fiber pretreatment: Stripping, the introduction of professional stripping tools, mainly for the peeling of the coating layer, to reduce the damage to the optical f...ဆက်ဖတ်ရန် »
When the optical cable is formed intoacable, there are two protection requirements for the optical fiber: one is that the optical fiber is less stressed; the other is that the optical fiber should be waterproof. The outermost layer of the optical cable isaplastic sheath, the inside isametal...ဆက်ဖတ်ရန် »
GYTA သောင်တင် Tube လူမီနီယမ်တိပ်ကေဘယ်လ်
The fibers, 125μm,are positioned inaloose tube made ofahigh modulus plastic. The tubes are filled withawater-resistant filling compound. A steel wire, sometimes sheathed with polyethylene (PE) for cable with high fiber count, locates in the center of core asameta...ဆက်ဖတ်ရန် »
GYFTY53 ကြိုးသွယ်တန်းထားသောချည်ကြိုး Non-metallic Strength Member အလင်း - သံချပ်ကာကေဘယ်လ်
The fibers,125μm,are positioned inaloose tube made ofahigh modulus plastic. The tubes are filled withawater-resistant filling compound. A Fiber Reinforced Plastic (FRP) locates in the center of core asanon-metallic strength member. The tubes (and fillers) are str...ဆက်ဖတ်ရန် »
အပြင်ဘက်ရေစိုခံနိုင်သည့် Crazybtplay - ODVA Fiber Optical Patch ကြိုး
post အချိန်: စက်တင်ဘာ -26-2020
၂၀၂၀ နှစ်တာကာလအတွင်း TTI Fiber စက်ရုံသည် ODVA Fiber Optical Patch ကြိုးအသစ်နှင့် ODVA-SC / LC / MPO Connectors များနှင့်ထောက်ပံ့သော optical cable များနှင့်အတူ 3G, 4G နှင့် WiMax Base Station ဝေးလံသောရေဒီယိုများတွင်သတ်မှတ်ထားသောစံမျက်နှာပြင်ဖြစ်လာသည်။ Fiber-to-the-Antenna application များ။ ODVA ca ... ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: စက်တင်ဘာ -21-2020
TTI Fiber စက်ရုံလက်ကားရောင်းဝယ်ရေး GYTS Fiber Cables, 125μm, သည်မြင့်မားသော modulus ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောချောင်ချောင်တွင်နေရာချသည်။ ပြွန်များသည်ရေစိုခံနိုင်သောအဆာနှင့်ပြည့်စေသည်။ အမျှင်ဓာတ်များစွာရှိသည့်ကေဘယ်ကြိုးအတွက်တစ်ခါတစ်ရံ polyethylene (PE) ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောသံမဏိကြိုးသည်အလယ်တွင်ရှိသည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
ပုံစံအသစ် ADSS Outdoor Fiber Cable-ADSS
----All Dielectric Self-supporting Aerial Cable 1 TTI Fiber Factory Supply New Style ADSS Outdoor Fiber Cable-ADSS: All Dielectric Self-supporting Aerial Cable Type One: The fibers, 125μm, are positioned inaloose tube made ofahigh mod...ဆက်ဖတ်ရန် »
အောင်မြင်သော TTI Fiber ကုမ္ပဏီ၏ CIOE ပြပွဲအားဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ပြောကြားသည်။
-----Keep your feet on the ground, never forget your original ideals & aspirations Warmly Celebrate the success of TTI Fiber Communication Tech Co., Ltd. in the CIOE Fair！！！ The 22nd China International Optoelectronic Expo (cioe2020) o...ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: စက်တင်ဘာ -01-2020
The Newly Introduced Optical Fiber Equipment(0.9mm Fiber Optic Cable Dedicated Cable Machine) has many advantages and features from TTI Fiber Company Factory: 1. Automatic memory the cutting length. Electrical drivencutting knife. Cutting times is adjustable. Cutting length can be set. 2. Electr...ဆက်ဖတ်ရန် »
၂၂ ကြိမ်မြောက်တရုတ်အွန်လိုင်း Optoelectronic Expo (CIOE2020)
Exhibition Area:ICT Exhibition Hall: Number6Hall Booth Number: 6A73 Time:September 9th-11th Booth Address: SHENZHEN WORLD EXHIBITION&CONVENTION CENTER(Baoan New Hall) No.1 Zhancheng Road,Fuhai Street,Baoan District, Shenzhen TTI Fiber Communication Tech Co., Ltd. Exhibits Range...ဆက်ဖတ်ရန် »
GYXTW Outdoor Cable Unitube အလင်း - သံချပ်ကာကေဘယ်လ်
ယူနီဘူပေါ့ - သံချပ်ကာ Cable အမျှင်များ - ၁၂၅ μmm - ကို TTI Fiber ကုမ္ပဏီစက်ရုံမှမြင့်မားသော modulus ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပြာများဖြင့်နေရာချသည်။ ပြွန်များသည်ရေစိုခံသောအဆာနှင့်ပြည့်စေသည်။ ထိုပြွန်ကို PSP အလွှာဖြင့် longitudinal ဖြင့်ပတ်ထားသည်။ PSP နှင့်ပြွန်ရေပိုက်များအကြား ... ဆက်ဖတ်ရန် »
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Cable ကို Cutter စက်
TTI Fiber ကုမ္ပဏီသည်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသစ်စက်စက်မိတ်ဆက်ထားသော Optical Fiber Equipment (အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Cable Cutter) တွင်အားသာချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ ကေဘယ်ကြိုးအရှည်၊ ကေဘယ်ဖြတ်စက်အရေအတွက်၊ ဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အရေအတွက် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
2020 ခုနှစ်အသစ်အထူးသဖြင့် Fiber Box ကိုအပိုင်း 1
Pull Type 24 Port Optical Fiber Terminal Box The Product Function of Optical Fiber Terminal Box—Pull Type 24 Port, it has Multi-functions: 1–Introducing optical cable, leading out wiring pigtail, fixing and protecting optical cable, wiring pigtail and the performance of optical fibe...ဆက်ဖတ်ရန် »
GJPFJU field mobile cable sue several 900um flame-retardant tight buffer fibers as optical communication medium,the tight buffer fiber wrapped withalayer of aramid yarn as strength member units,and the cale is completed withaTPU sheath. After TTI Fiber Factory's ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ADSS အားလုံး dielectric self-supporting aerial cable ကို
ADSS cable is loose tube stranded.The fibers, 125μm,are positioned inaloose tube made ofahigh modulus plastic. The tubes are filled withawater-resistant filling compound. The tubes and fillers are stranded aroundaFRP asanon-metallic strength member intoacompa...ဆက်ဖတ်ရန် »
GYFH ဗဟို Micro Beam Tube 5G Optical Cable
post အချိန်: ဇွန် -9-2020
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူတို့၏ဘဝလိုအပ်ချက်မှာမြင့်မားလာသည်။ သို့သော်၎င်းသည် 4G မှ 5G သို့လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသည်။ TTI သည် The Times ၏အရှိန်အဟုန်ကိုလိုက်နာပြီး GIFH 5G Optical Cable အသစ်ထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 250 um optical ... ဆက်ဖတ်ရန် »
Pပြီလအစောပိုင်းက CBP မှတရုတ်မှအတု KN95 မျက်နှာဖုံး ၂၀၀၀ ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်
CBP မှတရုတ်မှအတု KN95 မျက်နှာဖုံး ၂၀၀၀ ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းလိုက်သည်။ ဤအမြင်သည်မှန်ပါသလား။ ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားအနေဖြင့်တရုတ်ထုတ်ကုန်အများစုသည်မညီမညာဖြစ်နေသည်။ စင်စင်နာတီ - စင်စင်နာတီမှယူအက်စ်အကောက်ခွန်နှင့်နယ်စပ်ကာကွယ်ရေးအရာရှိများသည်စင်စင်၌ဖမ်းဆီးထားသော KN95 မျက်နှာဖုံးစွပ် ၂၀၀၀ ကိုသိမ်းဆည်းရမိ ... ဆက်ဖတ်ရန် »
TTI ကုမ္ပဏီသည်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူး splice ပိတ်သိမ်းသည့်ထုတ်ကုန်ကိုတက်ကြွစွာအားပေးသည်။
post အချိန်: နိုဝင်ဘာ -29-2019
အစက်အပြောက်အပူကျုံ့သောတံဆိပျ fiber optic splice ပိတ်ခြင်းသည် acombination cable closure နှင့် splice organizer.The splicing joints splice tray အလယ်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ခတ်များနှင့်အပူစွမ်းအင်ကိုသုံးနိုင်သောအင်္ကျီများကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ပူပြင်းသည့်အရည်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး fiber cable cable splice points သို့…။ ဆက်ဖတ်ရန် »
Optical Fiber Cable ကို Terminal နှင့် Box ကို
post အချိန်: ဇူလိုင် -31-2019
စက်ရုံတွင်ကုမ္ပဏီ၏ကေဘယ်လ်ရပ်စဲမှုဌာနခွဲသည်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးနှင့်ပါဝါကေဘယ်များဒီဇိုင်းနှင့်ရပ်စဲခြင်းနှင့်ဖိုက်ဘာရပ်စဲခြင်းသေတ္တာများအပါအ ၀ င်အသေးစားပူးတွဲပါ ၀ င်မှုတို့ကိုအထူးပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် cable အမျိုးအစားကိုမဆိုအဆုံးသတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက focu ... ဆက်ဖတ်ရန် »
၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိအဓိကကစားသမားများ၊ လျှောက်လွှာများ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခန့်မှန်းမှုများနှင့်အတူ MENA Fiber-optic Cable Market Analysis
ယခုအခါ Market Study Report, LLC တွင်ရရှိနိုင်သည့် MENA Fiber-optic Cable စျေးကွက်၏သုတေသနအစီရင်ခံစာသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနယ်ပယ်အပေါ်သက်ရောက်နေသောအချက်များအားအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ထားသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည်စျေးကွက်အရွယ်အစား၊ စီးပွားဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းဖော်ပြသည်။ ဆက်ဖတ်ရန် »
ECOC 2018 ပြပွဲ - TTI Fiber
Post ကိုအချိန်: Sep-28-2018
စသည်တို့ကိုဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း, fiber optic patch ကိုကြိုး, MPO / MTP ဖြေရှင်းနည်းများ, PLC splitters, FTTH Solutions, Booth အမှတ်: TTI Fiber အီတလီနိုင်ငံ TTI Booth အမှတ် 230. ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူ-ရောင်းချထုတ်ကုန်ပြရောမမွို့ရှိ ECOC 2018 ပြပွဲသို့တက်ရောက် : 230 အချိန်: စက်တင်ဘာ 24-26, 2018 Place: ရောမမြို့, အီတလီ ဆက်ဖတ်ရန် »
ECOC 2017 ပြပွဲ - TTI Fiber
TTI Fiber attended ECOC 2017 ExhibItion in Gothenburg, Sweden TTI Booth No. was 230. We showed our hot-sale products: fiber optic cables, fiber optic patch cords, MPO/MTP solutions, PLC splitters, FTTH Solutions, etc. Booth No.: 425 Time: Sept. 18-20, 2017 Place: Gothenburg, Sweden ဆက်ဖတ်ရန် »
ECOC 2016 ပြပွဲ - TTI Fiber
Post ကိုအချိန်: Sep-22-2016
TTI Fiber Düsseldorf, ဂျာမနီအတွက် ECOC 2016 ပြပွဲ wich ကိုင်တက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Spet ကနေ3ရက်အတွင်းအဘို့ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ Spet မှ 19 ။ 21, 2016 TTI Booth အမှတ် 274. ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူ-ရောင်းချထုတ်ကုန်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်: စသည်တို့ကို fiber optic patch ကိုကြိုး, MPO / MTP ဖြေရှင်းနည်းများ, PLC splitters, FTTH Solutions, သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်,့... ဆက်ဖတ်ရန် »
ECOC 2015 ပြပွဲ - TTI Fiber
Post ကိုအချိန်: Sep-24-2015
TTI Fiber attended ECOC 2015 ExhibItion in Feria Valencia, Spain TTI Booth No. was 348. We showed our hot-sale products: fiber optic patch cords, MPO/MTP solutions, PLC splitters, FTTH Solutions, etc. Booth No.: 274 Time: Sept. 19-21, 2016. Place: Düsseldorf, Germany ဆက်ဖတ်ရန် »